ZOJI Z8, ụgbọ ala niile na-erughị euro 150 | Gam akporosis
ZOJI Z8, ụgbọ ala niile na-erughị euro 150
ZOJI bụ onye Asia na-emepụta ihe pụrụ iche n'iwepụta ọdụm na-enweghị atụ na ọnụ ahịa knockdown. Ma ugbu a, ha ka bipụtara vidiyo nke ha gosipụtara ule nguzogide zuru oke na ZOJI Z8, Ekwentị ọzọ ZOJI dị larịị nke kwụpụtara maka nnukwu nguzogide egwu na ọdịda. N'ileghachi anya na ule a na-etinye ha, o doro anya na ọrụ ndị otu ụlọ ọrụ ahụ mere magburu onwe ya.
Na mgbakwunye, a ghaghi iburu n'uche na ZOJI Z8 nwere ike debezi ego maka euro 145 na Aliexpress na ịpị ebe a . Ọnụ ego ọchị na-atụle atụmatụ ekwentị a na ujo ma dobe nguzogide.
ZOJI Z8, a jupụtara na nkume ekwentị na-akpali nnọọ mmasị ngwaike
ihe omuma nke mbu banyere nke a ZOJI Z8 bụ na ekwentị sitere n'ike mmụọ nsọ site na uwe Darth Vader, otu n’ime ihe odide ama ama na Star Wars saga. N'iji mara mma nke ukwuu ma dị na ndo dị iche iche ka ị nwee ike ịhọrọ agba kachasị amasị gị, ekwentị ahụ nwere anụ ahụ dị nro nke ga-egbochi ekwentị imebi ma ọ bụrụ na ọ na-enwe ụfụ ma daa.
Iji bido aru gi mee polycarbonate Nnukwu nguzogide, o nwere mkpuchi mkpuchi ọla nke na-enye ọnụ ya nnukwu nsogbu. A ga-agbakwunye nke a na igodo njikwa olu na bọtịnụ gbanye / gbanyụọ nke ZOJI Z8, nke a na-eji zinc alloy site na usoro CNC nke na-enye ekwentị nnukwu nkwụsi ike.
Teknụzụ anyị hụrụ onwe anyị na etiti ekwentị. Iji malite, ZOJI Z8 nwere a ihuenyo nwere 5-inch IPS panel nke ahụ ruru mkpebi nke pikselụ 1280x 720 na Corning Gorilla Glass nchedo iji gbochie ngwaọrụ ịta ahụhụ ma ọ bụ akara enwere ike na ihuenyo. Dị ka ọ dị na mbụ na ekwentị ndị China, ụmụ okorobịa si ZOJI ahọrọla nhazi MediaTek MT 6750 iwebata ekwentị ọhụrụ gị.
Ana m ekwu maka ihe dị asatọ isi SoC nke ruru ọsọ elekere ruo 1.5 GHz yana a ARM Mali T860 MP2 GPU na 520 MHz, 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa dị n'ime enwere ike ịgbasa site na oghere kaadi micro SD ya ruo 128GB. Batrị 4.250 mAh ya nwere ikike karịrị iji kwado oke ibu nke ngwaike ZOJI Z8, yana nnwere onwe ruru ụbọchị abụọ.
Anyị enweghị ike ichefu igwefoto ha: n'otu aka anyị nwere a 16 megapixel n'ihu igwefoto na HDR mode, autofocus na panoramic mode n'etiti nhọrọ ndị ọzọ, na mgbakwunye na igwefoto n'ihu nke 8 megapixels, karịa ezuru iji mee ezigbo selfies ma ọ bụ oku vidiyo. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ZOJI Z8 ị nwere ike ịkwụsị ya mgbe niile emeputa website ikpughe ihe nzuzo niile nke ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ZOJI Z8, ụgbọ ala niile na-erughị euro 150
Ihe kacha mma Spanish
Denye !! Nweta Moto G4 naanị euro 150